Iikhosi ze-100 + zasimahla ezikwi-Intanethi eCanada ezineZatifikethi 2022
Novemba 22, 2021 SAN
Kukho iikhosi ezininzi zasimahla kwi-Intanethi eCanada ezinezatifikethi zokusika, ezempilo yoluntu, ezolonwabo, ezolawulo, ezokwakha, ezendalo, ezokutya kunye nokunye.
Ezi zifundo zivulelekile kubantu abanomdla kwaye ubukhulu becala zithathwa kwi-Intanethi kwi-Coursera nakwezinye izinto amaqonga okufunda online.
Iikhosi ezikwi-Intanethi zinokujongwa njengezikhuthazi kumakhondo omsebenzi njengoko zongeza kwinto umntu sele eyazi okanye esebenza njengomthombo wolwazi olutsha.
Ukusuka kwiirekhodi, iCanada lelinye lawona mazwe anezona mfuno ziphakamileyo zokungeniswa kwabafundi. Uninzi lwabafundi bamanye amazwe bangena eCanada minyaka le ngeenjongo zokufunda kwaye inani elamkelwayo lingaphezulu kwe-x3 yenani elamkelweyo.
Oku kuthetha ukuba uninzi lwamazwe abafundi abafuna ukufundisisa eCanada bajongene nokwaliwa ngesizathu esinye okanye esinye.
Iikhosi ezikwi-Intanethi zancede abaninzi ukuba bafumane izatifikethi eziluncedo kwi-Intanethi kwaye kungenxa yesizathu sokunceda abafundi ukuba bafikelele kwizifundo ezenziwa kwi-Intanethi ngezatifikethi zasimahla nezishicilelweyo esibhale kuzo isikhokelo esifundwayo iikhosi ezikwi-Intanethi ezinezatifikethi ezinokuprintwa.
Kweli nqaku kukho izifundo ze-intanethi ezinezatifikethi zokugqitywa eCanada oya kuzifumana zinomvuzo kakhulu.
Ukuthatha inxaxheba kwikhosi ye-intanethi enikezelwa yiyunivesithi yaseKhanada kunye nokufumana isatifikethi esiza nekhosi emva kokugqiba kunokuthelekiswa free spin emva kobhaliso kwikhasino kwaye inokuba yintuthuzelo elungileyo kubafundi abangekafiki eCanada. Kukho ezinye zezifundo zasimahla ze-intanethi ezibonelelwa ngurhulumente waseCanada nazo eza nesatifikethi.
Abafundi baseKhanada kunye nabafundi bamazwe aphesheya abangabahlali eCanada banokusebenzisa ezi zifundo ukuze bafumane ulwazi oluninzi kunye nokuphucula iiCV zabo.
Zininzi iikhosi ezikwi-Intanethi kwihlabathi liphela. Abanye banezatifikethi, abanye abanazo. Abanye basimahla, abanye bahlawule. Ezinye zenzelwe amazwe athile, ezinye zenzelwa wonke umfundi wamazwe aphesheya.
Apha, kugxilwe kum kwizifundo zasimahla ze-Intanethi eCanada ezinezatifikethi kwaye ndiza kwabelana malunga neshumi kwezi kunye nawe.
Iikhosi ze-10 zasimahla kwi-Intanethi eCanada ezineZatifikethi
Uphuhliso lweSoftware iikhosi zasimahla ezikwi-Intanethi
Ifashoni kunye noyilo iikhosi zasimahla kwi-Intanethi
Iikhosi zasimahla ezikwi-Intanethi kwizakhono ezifanelekileyo zokubhala
Ukulungiselela iikhosi ze-Intanethi zasimahla ze-IELTS
Iikhosi zasimahla ezikwi-Intanethi kwi-Akhawuntingi
Iikhosi zasimahla ezikwi-Intanethi kunxibelelwano lweShishini
Ikhosi yasimahla ekwi-Intanethi ekufundeni ukufundisa kwi-Intanethi
Ikhosi yasimahla ekwi-Intanethi kwisiNgesi kuPhuhliso
Iikhosi zasimahla zeDiploma kwi-Intanethi eCanada
Iikhosi zasimahla ze-IELTS ezikwi-Intanethi
Ukulungiselela iigranti zasimahla ezikwi-Intanethi
Ukulungiselela iikholeji zasimahla ze-Gmat kwi-Intanethi
Iikhosi zasimahla kwiYunivesithi ezikwi-Intanethi eKhanada
Isoftware yobunjineli yezifundo zasimahla ezikwi-intanethi
Ngoku ka Wikipedia, Uphuhliso lweSoftware yinkqubo yokukhulelwa, ukucacisa, ukuyila, ukwenza iinkqubo, ukubhala amaxwebhu, ukuvavanya, kunye nokulungiswa kwe-bug okubandakanyeka ekwenziweni nasekugcinweni kwezicelo, imigaqo-nkqubo, okanye ezinye izinto zesoftware.
Iikhosi zophuhliso lwesoftware zinikezelwa kwiqonga leCoursera. Abafakizicelo banokufumana i-bachelor okanye i-master degree kwisayensi yekhompyuter egubungela ukuphuculwa kwesoftware ngokupheleleyo kwiqonga.
Faka isicelo seKhosi
Ngaphandle kwemfuneko yokungena, le khosi yasimahla ekwi-Intanethi eCanada yenziwe ngokupheleleyo kwi-Intanethi kunye nokuqinisekiswa kwayo kwaye kuthatha iiyure ezingama-20 ukuyigqiba.
Le khosi yoyilo lwe-Intanethi inikezelwa kwiKholeji yokuFunda evulekileyo yaseBrentwood kwaye ubhaliso luvulekile unyaka wonke oko kuthetha ukuba ungafaka isicelo sale khosi ngoku.
Ezi zifundo zasimahla zokubhala kwi-Intanethi zibonelelwa liqela leeyunivesithi eziphambili kwaye zijolise ekuncedeni abathathi-nxaxheba baphucule izakhono ekubhaleni izincoko, iingxelo, igrama, amabali, ukubhala ishishini nokunye.
Le khosi yasimahla ekwi-Intanethi igubungela izifundo zokuphulaphula, ukuthetha, ukufunda nokubhala kuvavanyo lwe-IELTS.
IELTS lolunye lovavanyo olunyanzelekileyo lwabafundi abavela kumazwe angengawo amaNgesi abafuna ukufunda eCanada, e-Australia, e-US okanye kwamanye amazwe amaNgesi.
Le khosi ibanzi kwaye iyazicenga, ivumela abathathi-nxaxheba ukuba bathathe izifundo ngokufanelekileyo ngexesha labo elifanelekileyo.
Le khosi ye-intanethi yasimahla ayifuni mfuneko yokungena yokuqala. Iyazenzela kwaye ithatha malunga neeyure ezingama-20 ukuyigqiba.
Le yikhosi emfutshane kwaye ivulekile ukufumana izicelo ezivela kubathathi-nxaxheba abanomdla unyaka wonke.
Le khosi yasimahla ithatha malunga neeyure ezili-10 ukuya kwezili-15 ukuyigqiba kwaye kukho uvavanyo apho wonke umntu othabatha inxaxheba afuna ukupasa ikhosi ngokwanelisayo ukufumana isatifikethi kufuneka afumane amanqaku angama-80% ngaphakathi.
Ngaphakathi kwesi sifundo, uya kufunda indlela yokuphucula ubuchule bokubhala kweshishini lakho kwaye uphucule ubuchule bakho kunye nobuchule bokubonisa.
Le khosi ikwi-intanethi ngokupheleleyo kwaye isimahla hayi amaCanada kuphela kodwa wonke umfundi wamazwe aphesheya.
Le khosi inikezelwa kwi-Intanethi simahla kubafundi nasekufundisweni liBhunga laseBritane.
Olu luhlu aluphelelanga, kukho iikhosi ezininzi zasimahla kwi-Intanethi eCanada nakwamanye amazwe ehlabathi.
Kuluhlu lwam apha, ndizame ngako konke okusemandleni ukunciphisa izinto zam ukuya eCanada kwaye ke uninzi lwezifundo ezidweliswe apha ngasentla zinikezelwa simahla yiYunivesithi yaseBritish Columbia eCanada.
Ezinye zezi zifundo ngexesha lokukhutshwa kwazo ziza kunye nesatifikethi esipheleleyo emva kokugqitywa konke simahla kodwa njengoko ixesha liqhubeka, intlawulo iyafuneka kwizatifikethi, nangona ingezizo zonke, kusekho izifundo ezininzi zasimahla kwi-Intanethi eCanada nge Izatifikethi ezingadingi ukuba wenze intlawulo phambi kwesiqinisekiso kunokuba ugqibezele ikhosi ukuya ekugqibeleni.
Inkqubo yoPhuculo lweSoftware kunye nezoBunjineli ezinikezelwa yi IYunivesithi yaseBritish Columbia kwi-Coursera kunye neziqinisekiso zinikwa phantsi kweyunivesithi ekupheleni kwenkqubo.
Ukunciphisa ibali elifutshane, zininzi izifundo zediploma ezikwi-Intanethi eCanada kodwa okwangoku andizukufumana simahla. Apha ngezantsi kukho ezinye zezifundo zeDiploma ezikwi-Intanethi eCanada.
IDiploma kwi-Psychology esetyenzisiweyo nakwiNgcebiso
Iidiploma kuThengiso lwedijithali
Imveliso yeDiploma kwi-Intanethi
Unokufumana ngakumbi iikhosi ezifumanekayo zediploma yase-Canada kwi-Intanethi Apha kunye neefowuni zabo zesicelo.
Apha ngezantsi kukho iikhosi zasimahla ezikwi-Intanethi eCanada ngokukodwa zabafundi bamanye amazwe.
Ngelixa zonke iikhosi ezizodwa zasimahla ezidweliswe apha ngasentla zinokuthathwa ngabafundi bamanye amazwe kunye nabasekhaya ngokufanayo, sifuna ukugxininisa ngokukodwa kwezinye zeekhosi zasimahla ezikwi-Intanethi eziluncedo ngokukodwa kubafundi bamanye amazwe.
Uyazi, ukufunda eCanada, uyacelwa ukuba ubonise isiphumo esihle se-IELTS ke le khosi yathathelwa ingqalelo njengenye yezinto ezikuluhlu lwam lwezifundo zasimahla ze-Intanethi eCanada ezinezatifikethi zokunceda abafundi bamanye amazwe abafuna ukufunda eCanada kodwa khange enze amanqaku amahle nge-IELTS ekhokelela ekugatyweni kwabo okungapheliyo.
Inkqubo yoVavanyo loLwimi lwesiNgesi lwaMazwe ngaMazwe (IELTS) luvavanyo olusemgangathweni lwamanye amazwe olwazi lwesiNgesi kubathethi bolwimi lwesiNgesi.
Ilawulwa ngokudibeneyo liBhunga laseBritane, i-IDP: IELTS Australia kunye noVavanyo lweCambridge IsiNgesi kwaye iyimfuneko esisinyanzelo kubafundi bamanye amazwe abafuna ukufunda i-Canada ngaphandle kokuba kwimeko apho kukho ezinye iindlela umntu anokukhetha kuzo endaweni yokungenisa isitifiketi se-IELTS okanye Inqaku.
Unokufumana ngakumbi malunga Ikhosi yasimahla ekwi-intanethi kulungiselelo lwe-IELTS apha.
Ngelixa zininzi iikhosi ze-Intanethi zangaphambili ze-GRE eCanada, ndinomdla wokunxibelelana nomthombo.
Uviwo lweeRekhodi zeGraduate (i-GRE) luvavanyo olusemgangathweni oluyimfuneko yokwamkelwa kwabafundi kwizikolo ezininzi ezigqibeleleyo eMelika nase Canada. I-GRE yeyabanini kwaye ilawulwa yiNkonzo yoVavanyo lwezeMfundo (i-ETS).
I-ETS liqumrhu elisemthethweni eliphethe iGRE kwaye unako Cofa apha ukufikelela kuvavanyo lwe-GRE simahla kwi-Intanethi iikhosi kunye nezixhobo yi-ETS uqobo.
Uvavanyo lokwamkelwa kwabafundi kuQeqesho luvavanyo oluhambelana nekhompyuter elungiselelwe ukuvavanya uhlalutyo oluthile, ukubhala, ubungakanani, ukuthetha, kunye nezakhono zokufunda ngesiNgesi esibhaliweyo ukuze zisetyenziswe ukwamkelwa kwinkqubo yolawulo lwezifundo, njengenkqubo ye-MBA.
I-GMAT iyafuneka kwiiyunivesithi ezininzi eCanada, e-US kunye nezinye iindawo kwiinkqubo zokuthweswa izidanga.
I-MBA.com ngumzimba osemthethweni ophethe i-GMAT kwaye banezinto ezininzi Izifundo zasimahla ze-Intanethi ze-GMAT eCanada ukuba bonke abafundi bamanye amazwe banokufikelela naphi na emhlabeni.
Zininzi iikhosi zasimahla zasimahla ezikwi-intanethi ezifumaneka kwiiyunivesithi ezahlukeneyo ezivela kwihlabathi liphela kodwa kweli candelo, ndiza kugxila kwiikhosi zasimahla zasimahla ezikwi-intanethi eCanada.
I-Dinosaur Paleobiology Ikhosi yasimahla yeYunivesithi yase-Canada
KwiYunivesithi yase-Alberta, Canada (Dino 101).
Idatha yokuFunda komatshini Ikhosi yasimahla yeYunivesithi yase-Canada
Ngu-Alberta Machine Intelligence Institute, eCanada.
Uyilo lweApp kunye noPhuhliso lwe-iOS Ikhosi yasimahla yeYunivesithi yase-Canada
KwiYunivesithi yaseToronto, eCanada.
Funda kwiNkqubo: Izinto ezisisiseko Ikhosi yasimahla yeYunivesithi yase-Canada
Ukufunyanwa kwedatha ye-GIS kunye noYilo lweMephu Ikhosi yasimahla yeYunivesithi yase-Canada
Ukusebenzisana kwezinambuzane-zoLuntu Ikhosi yasimahla yeYunivesithi yase-Canada
KwiYunivesithi yaseAlberta, Canada.
Uyilo lweSoftware Ikhosi yasimahla yeYunivesithi yase-Canada
Intshayelelo kwimephu ye-GIS Ikhosi yasimahla yeYunivesithi yase-Canada
Isityalo seBioinformatics Ikhosi yasimahla yeYunivesithi yase-Canada
Iinkqubo zesoftware kunye neNkqubo ye-Agile Ikhosi yasimahla yeYunivesithi yase-Canada
Ezi zezinye zeekhosi zasimahla ezikwi-intanethi ezinezatifikethi onokuzifumana eCanada abafundi bamanye amazwe nabasekhaya abanokufaka isicelo kuzo naphi na emhlabeni. Inye kuphela into ekufuneka uyiqaphele nangona kunjalo kukho intlawulo eqhotyoshelweyo ekwenzeni uviwo lokugqibela kunye nokufumana isatifikethi sokugqitywa kwekhosi.
Njengomfundi, ukuthatha inxaxheba nakwezinye zezi zifundo kuyacetyiswa. Nokuba ufumanisa ukuba ikhosi oyithathayo ifuna ukuhlawulwa ngaphambi kwesiqinisekiso ungaqhubeka ufumane isatifikethi ukuba unemali kodwa ukuba awunalo, bamba ulwazi kuqala.
Ulwazi lubaluleke ngaphezu kwesiqinisekiso sephepha nje. Usenokubeka ulwazi oluqokelele kwezi zifundo ulusebenzise kakuhle ngaphandle kokufumana isatifikethi.
Kwabo bathandana ngokunzulu neCanada, ndiye ndadwelisa uluhlu lwe iiyunivesithi eCanada ezingabizi mrhumo wesicelo.
Ezi yunivesithi zivulelekile kubo bobabini abafundi basekhaya nakwamanye amazwe kwaye njengoko bengabizi mali yesicelo, unokufaka isicelo sokwamkelwa kwi-intanethi kwezi yunivesithi konke simahla! Lungisa nje amaxwebhu akho kwifomathi yePDF kwaye iyakuba yiyo yonke
Apha ngezantsi kukho amanye amanqaku ethu kwizifundo ezahlukeneyo zasimahla ezikwi-Intanethi ezinokukunceda;
Iiyunivesithi eCanada Ngaphandle kwe-IELTS
Izikolo eCanada Ngaphandle kweNtlawulo yokufaka isicelo
Ungasifaka njani isicelo seDyunivesithi yaseCanada
Izifundo zesatifikethi eCanadaizifundo zekhompyuthaIzifundo zasimahla ezikwi-Intanethi izatifikethi zecanadaIzifundo zasimahla kwi-Intanethi eCanadaIzifundo zasimahla zediploma ezikwi-intanethi eCanadaiikhosi ezikwi-intanethi eCanada
Post Previous:Indlela yokubhala umhlathi womzimba olungileyo kwisincoko esiphikisanayo?
Okulandelayo Post:IiNdawo ezi-7 eziBalaseleyo zokuthengisa kwakhona iiNcwadi zakho zesiFundo
Meyi 17, 2022 kwi-12: 51 pm
slope unblocked uthi:
Matshi 14, 2022 kwi-11: 06 am
Meyi 27, 2021 kwi-10: 21
Nceda undithumele malunga namayeza asimahla
Ikhosi yeziqinisekiso ezikwi-Intanethi kwiiyunivesithi zaseCanada
Meyi 28, 2021 kwi-5: 53
Ungabhalisa nje ngekhonkco elinikiweyo.
amakhondo omsebenzi kuqeqesho lwe-IT kwi-Intanethi uthi:
January 27, 2021 apha 1: 16 pm
Ikhondo lomsebenzi wokufunda ngomatshini we-python khosi, ufumana ukuqonda okunzulu kweentlobo ezintathu eziphambili zokufunda ngomatshini, kubandakanya ukugadwa, ukungalawulwa, kunye nokomeleza ukufunda.
Neil Patel uthi:
January 6, 2021 kwi 8: 22 am
Enkosi ngokwabelana ngolu lwazi
UCharles Hilton O uthi:
Oktobha 7, 2020 kwi-1: 21 am
Ngaba ungandithumela ikhonkco eCanada kwiikhosi zasimahla zemigca.
UAbul Hasan Belal uthi:
Oktobha 4, 2020 kwi-6: 43 pm
Mnumzana, ndifuna ukufunda kweli qonga lokufunda nge-elektroniki. Nceda undithumelele i-imeyile kunye nemiyalelo yendlela yokufunda iikhosi kweli qonga. Enkosi.
UAbul Hasan Belal.
NgoSeptemba 18, 2020 kwi-9: 08 pm
Ndiphelelwe ngumsebenzi ukusukela oko ubhubhane uvalekile .. Ngelishwa, kude kube ngoku, kwakusenzima ukuba ndiyifumane. Ke ndaye ndagqiba kwelokuba ngelixa ndikhangela omnye umsebenzi, ndenze iiklasi ze-Intanethi ukuze ndihlale ndihleli. Ndinomdla kwizifundo zesiNgesi (idiploma okanye isatifikethi). Ndingavuya ukuba kuya kubakho iiklasi zasimahla kwi-Intanethi okanye ngentlawulo encinci iya kulunga.
Enkosi . Hlala ukhuselekile.
I-Bajrang sah uthi:
Epreli 25, 2020 kwi-6: 29 pm
Ulwazi oluhle, Enkosi Umbhali. Esi sithuba senza ukuba yonke imibuzo yam icace. Enkosi
krishan sharma uthi:
February 7, 2020 kwi 4: 00 pm
Ndifuna ukuqala ikhosi, nceda unike ulwazi oluthe kratya
February 11, 2020 kwi 6: 07 pm
Siza kujonga kule nto. Ndiza kupapasha iziphumo zam kule bhlog kungekudala, gcina iliso.
Julayi 31, 2019 kwi-11: 05 pm
Iposi entle..Siyabulela ngokwazisa.reuseusefu.